सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सामानुपातिक विकास नहुनुमा दोषी को ?
Saturday, 27 Feb, 2016 8:13 AM
प्रेम सिंह भाट
देशको सूदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नेपालको संविधान २०७२ अुनसार हालको प्रदेश नम्बर सातको वर्तमान अवस्था गम्भीर मोडमा छ । गरिबी बढिरहेको छ । अन्य विवास क्षेत्रको तुलनामा विकासको हिसाबले ८० बर्ष पछाडी गरिबीको हिसाबले १५ बर्ष पछाडी रहेको कुरा जानकारीमा आएको छ ।
मुलुकको राणाकाल, पञ्चायतिकाल, प्रजातन्त्रकाल, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको हरेक शासकिय पद्दतीले पाच वटा विकास क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रनै सबै भन्दा पछाडी पर्नुको पार्नुको कारण अवको सात नम्बर प्रदेशले खोज्नु पर्ने भएको छ । हामीले सोधी र खोजि गर्नु गर्नु छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सामानुपातिक विकास नहुनुमा दोष कसको हो ?
यदी यो कारण पत्त नलगाउने हो । यहि अन्य विकास क्षेत्रको तुलनामा सु.प.को विकासको वाधक र कारक को ? के सुदुरपश्चिमाञ्चलमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना छनौट गर्न सकिएन किन ? देश विकासको योजना निर्माण गर्ने तह र तप्काको यस क्षेत्रको विकासमा समयमा ध्यान गएको हो कि होईन ? वा योजना आयोग सम्म यस क्षेत्रको भौतिक विकास निर्माणका बिषय र एजेण्डा पु¥याउने जिम्मेवारी कसको थियो र हो ? हामी सबैले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
यी प्रश्नको उत्तर यी सावलको जवाफ कसले दिनु पर्छ । कसको जिम्मेवारी हो । कोही पक्ष निकाय वर्ग जिम्मेवार हुने कि नहुने यक्ष प्रश्न सकै सुदुरपश्चिमाञ्चल वासीहरुलाई । हामी सभा समिनार गोष्ठी अन्तरक्रिया मा सहभागि हुदा“ अधिकांश वक्ताहरुले स्थानिय समाजि नागरिक समाज आम जनताले आफै अग्रसर हुने हो । अरु गरिदेला भनेर अर्कोको मुख ताक्नु हुदैन । राज्यको संग माग्ने होईन राज्य लाई दिने हो भन्ने कुरा अधिकांश आयातित वत्ताहरुले भन्ने गर्नु हुन्छ ।
यस क्षेत्रमा जनताले अहिले सम्म राजनैतिक दलहरुलाई जुन बेला जुन दल लाई मत दिनु पथ्र्यो दिए । सरकारमा पठाए । राज्य लाई दिनु पर्ने सवालमा नेपालका अरु अञ्चल मध्ये कर, राजश्व तिर्नमा सेति अञ्चलका अन्तरिक राजश्व कार्यालय प्रथम र महकाली अञ्चलका राजश्व कार्यालय द्धितिय स्थान हासिल गरएको छ । कला संस्कृति र धर्मको संरक्षण गरेको छ, अटल राखेको छ । प्राकृतिक सम्पत्ति पर्या–पर्टनका सम्पादनको प्रवद्र्धन गरिनै रहेको छ । आपसी सदभाव, एकता तथा शान्तमय बाताबरण कायम गरेको छन् । त्यो भन्दा बढि सुदूरपश्चिमीको जनताले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस क्षेत्रका बुद्धिजिवी विद्धानस राजनैतिक दलहरु सूदुरपश्चिमाञ्चल विकास सम्भावनाका अवसरका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । चर्चा हुन आवश्यक छ तर सम्भावनाका बिषयमा गहिरो अध्ययन अनि तत्काल गर्न सकिने कार्य, दिर्घकालमा गरिने कार्य र जिम्मेवारी नेपाल सरकारको कुन मन्त्रालयले लिने कुन मन्त्रालयलाई दिलाउने भन्ने वा ति विकासका सम्भावनाको निर्माणको नेतृत्व कुन स्थानिय निकायले लिने भन्ने कुरा स्पष्ट र किटान हुन आवश्यक हनु पर्दछ भन्ने लागेको छ ।
नेपालको विकास निर्माणका लागि दातृ संस्थाहरु, बैदेशिक सहायत गर्दै आईरहेका छन् । त्यसको एक प्रतिसत पनि सुदूरपश्चिमा लगानी गरेको छैन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात कृषि, पशु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति रकम बैदेशिक सहायता आयो र त्यसको अंश सुदुरपश्चिममा पुगेन । यदि कथम कदाचित पुगिहाले पनि कैलाली, डडेल्धुरा र दिपालयमा मात्र सिमित भयो भन्ने सुनेको छु । झन दार्चुला, बझाङ्ग , बाजुरा, अछाम, बैतडीमा त झन कम लागनी भएको छ । यसको दोष सुदुरपश्चिमवासी लाई दिने हो वा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि अग्रसर समाजसेवी लाई दिने वा यस क्षेत्रका राजनैतिक लाई वा योजना आयोग लाई यो गम्भीर बिषयमा यहा“का जनताले समय समयमा चर्चा र परिचर्चा गर्ने नै छन् ।
मलाई लाग्छ हामीले नीति बनाउनदा सुदुरपश्चिमाञ्चलको सहभागिता गराउन सकेनौ । नीति निर्माणले यस क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै नीति बनाउनु पर्छ वा नीति भित्र विषेश सहुलियत दिन पर्छ भन्ने आवाज उठाउन सकिएन यदि उठाउन सकिएको भए नेपालका अविकसित विकास क्षेत्र, अल्प विकसित विकास क्षेत्र तथा विकसित विकास क्षेत्रका लागि एउटै उद्योग नीति, एउटै वाणिज्य नीति, एउटै पर्यटन नीति एउटै शिक्षा नीति बन्ने थिएन ।
भन्छन सु.प.मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता मध्ये टकनपुर महेन्द्रनगर लिंक रोड निर्माण भारतले गर्ने सहमति भयो । पश्चिम सेति परियोजना बन्ने भनेको बर्षौ भयो ।यी परियोजनाको पहिलो सरोकार सुदुरपश्चिम वासीहरुको हो । सबै भन्दा बढि हित यस क्षेत्रका जनताको हो । सबै भन्दा समस्या र क्षती यस क्षेत्रका जनताहो हो । तर राष्ट्रिय सरोकारका नाममा यी परियोजना हुन नदिने तत्वको खोजि गर्न र यी कार्यका लागि ठोस रुपमा पहल गर्न सबै राजनैतिक दलहरुको अहम भुमिका हुनु पर्दछ ।
पर्यटन विकास संगै समृद्ध सुदूरपश्चिमको कल्पना गरेका छौ । एक दसक भई सक्यो । नेपाल सरकारले भिजिट नोपल १९९८ मनायो, नेपाल पर्यटन बर्ष मनायो । यी बर्ष मनाउदै गर्दा महाकाली नदिको पुल ४ घण्टा खोल्ने गरेको त्यस लाई बढाउन प्रयास गरेन । एक बर्ष हुदैछ निजी क्षेत्रको प्रयासमा बल्ल उक्त पुल ७ घण्टा खोलिएको छ । निजी क्षेत्रले पर्यटन विकासका लागि नेपाल पर्यटन वोर्डको क्षेत्रिय कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन । न त पर्यटन मन्त्रालयको क्षेत्रिय कार्यालय नै ।
बिडम्बना छ यस सुदूरपश्चिममा अस्पताल छन् डा. छैनन् । सम्भावना छ श्रोत छैन । जनशक्ति छ दक्षता छैन । हवाई मैदान छन हवाई सेवा छैन् । बैङ्क छन् कृषि ऋण छैन् । तसर्थ शुक्लाफांटा आरक्ष घुम्न चाहन्छन चितवन सरहको शुल्क छ । जुन प्रवेश शुल्क छिमेकीका लागि पनि चर्को छ । अपि नाम्पा हिमालमा रोयल्टी निः शुल्क गरको तर अपि नाम्पाको बेश सम्म जान सडक छैन् । यस बिषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
आज मैले चर्चा सुदूरपश्चिमको विकासको बिषय क्षेत्रमा संक्षिप्त जानकारी पस्कन खोजको मात्र हो । हामी यसै किसिमले भाषण मात्र गर्दै जाने जिम्मेवारी कसैले कुनै पनि निकाय, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थाले , कुनै पनि समुदायले नलिने हो भने सात नम्बर प्रदेशको सोचे अनुरुपमा विकास हुन ज्यादै कठिन हने छ ।
तसर्थ भन्ने पछै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरुमा हैसियत प्राप्त गरेका राजनेतहरुको गम्भीरध्यान गएको छ । तर गुहकार्यको अभाव हुन सक्छ यस लाई जिम्मेवारी पूर्वक निर्बाह गर्न र राज्यबाट पचासौ बर्ष देखि धोका दिएको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रले अवको पाचं बर्षमा राज्यबाट अधिकतम श्रोत लिन सक्नु पर्दछ । राज्यले क्षतीपूर्ति स्वरुप विशेष सहुलियत सहितको प्याकेज उपलव्ध गराउन पर्दछ । लेखक कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी अधिकृत हुन ।